Exposure တုံ့ပြန်မှုတားဆီးခြင်းကုထုံး (မျိုးသုဉ်းခြင်း) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
နည်းဗျူဟာအနည်းငယ်ရှိပြီး၎င်းသည်ခလုတ်တစ်ခုသို့မဟုတ် cue နှင့်ထိတွေ့သောအခါတုန်ခါမှုကိုလျော့နည်းစေသည်။ YBR တွင်ဤချည်မျှင် - တတ်ပြီးထိန်းချုပ်အန္တိမနည်းလမ်း - နည်းလမ်းစုံ၏ကောင်းကျိုးနှင့်ဆိုးကျိုးများကိုဆွေးနွေးထားသည်။
ဤသူသညျကရှင်းပြခဲ့သည် ဘယ်လိုသူသညျမိမိဦးနှောက် rewire ဤချဉ်းကပ်နည်းကိုအသုံးပြု:
ငါ့အဘို့အထောက်အကူဖြစ်တော်မူကြောင်းကို၎င်း ERP technique ကိုအတော်လေးအစွန်းရောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါပြုပါအတိအကျအဘယ်အရာကို ERP အောင်မြင်ရန်ဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်ရုံသောအရာကိုသင်တို့အားရှေ့ဦးစွာသတိပေးပြီးတော့အသေးစိတ်တာကအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ထင်ပါတယ်။
ERP သည် Exposure and Response Prevention ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် 'ညစ်ညမ်းမှုနှင့်ထိတွေ့မှု' ကိုဖန်တီးပြီး 'တုန့်ပြန်မှု (တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း) ကိုတားဆီးသည်။ ဒါပေမယ့်ဘာကြောင့်လဲ?
ငါအကောင်းဆုံးခု၏ဒီတက်ကိုဖတ်ပြီဥပမာတစ်ခုတောင်ထိပ်မှာနှင်းလျောစီးသည်။ လတ်ဆတ်တဲ့ဆီးနှင်းသည်နေရာတိုင်းသူဝင်ချွတ်။ တောင်ပေါ်ကဆင်းစုံလင်သောလမ်းရှာဖွေခြင်း, သူသည်ဤလမ်းနှင့်ကြောင်းတတ်၏။ ရွေးကောက်တော်မူလမ်းကြောင်းကို defining ခုနှစ်တွင်သူသည်မိမိအ enjpyment optimized နှင့်ဤစီးနင်းတဲ့စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ကြောင်းသက်သေပြခဲ့သည်။
သူဟာပျဉ်ပြားထိပ်ဖို့ chairlift နှင့်ပြန်။
Next ကိုပြေးပထမဦးဆုံးတစ်ဦးထပ်ဖြစ်ပါတယ်။ သူသည်နောက်တဖန်ယခုအချိန်တွင်ဖမ်းယူမိမိရှေးခယျြသောလမ်းကြောင်းကိုအကောင်းဆုံးကိုစိတ်လှုပ်ရှားခြင်း, optimized လမ်းကြောင်းတစ်နှင်းလျောစီးပေါ်မှာပျော်စရာရှိသည်ဖို့အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုပေးထားသူထိပ်ပြန်လည်ရောက်ရှိကြောင်းတစ်ချိန်ကပိုပြီးအတည်ပြုအောက်ဆုံးရောက်ရှိ။ သူကထိပ်ပေါ်မှာရပ်နှင့်အချကြည့်နှင့်သာသည်သူ၏ singel လမ်းကြောင်းမြင်သည်။ သူ့အဘို့တစ်ဦးတည်းသာလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်လည်းမရှိ။ သူသည်နောက်တဖန်ဝင်တစ်ဦးကကောင်းစွာသတ်မှတ်နှင့်အကောင်းဆုံးလမ်းကြောင်းကိုနဲ့ off ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှု။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းဖြစ်ပေါ်စေသောဓာတုဗေဒဆိုင်ရာအမြင့်များနှင့်ချိတ်ဆက်တိုင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်နှင်းဖုံးနှင်းနှင်းကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့လည်းထပ်ခါထပ်ခါလိုက်လျှောက်နေသည့် ဦး နှောက်ထဲတွင်လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖန်တီးနေသည်။ ကျွန်တော်တို့ဟာကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်တစ်ခုကိုရေးခဲ့သလို start button ကိုနှိပ်ပါ။ သီချင်းတစ်ပုဒ်နဲ့တူတယ်၊ ငါတို့ကစပြီးအခန်းတိုင်းကိုအတူတူသီဆိုတယ်။ ဤအာရုံကြောလမ်းကြောင်းသည်စိတ်လှုပ်ရှားမှုမြင့်မားစေရန်သို့မဟုတ်မြင့်မားစေရန်အဝေးသင်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုပြင်မွမ်းမံထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်ကြသည်။ အဘယ့်ကြောင့်အဘယ်ကြောင့်ထ။ ကျွန်ုပ်တို့လွတ်လပ်မှုကိုမချိုးဖောက်နိုင်ပုံမရသည့်မယုံနိုင်လောက်အောင်အားကောင်းသောကြိုးများဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်၏အစိတ်အပိုင်းကိုအားဖြည့်ပေးသည်။
ကျနော်တို့အထဲကသရုပ်ဆောင်တစ်ဦးကော့တေးသို့ထုတ်လုပ်ယောက်ျားဦးနှောက်, အင်တာနက်ညစ်ညမ်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ chemestry အမှန်တကယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကွယ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အလိုတော်ပါဝါကိုရပ်တန့်ရန်လုံလောက်သောဘယ်တော့မှသည်အဘယ်ကြောင့်ဤအဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှင်းလျောစီးသမားကတောင်ထိပ်ကိုသွားပြီးလုံးဝကွဲပြားခြားနားတဲ့လမ်းကြောင်းအသစ်တစ်ခုကိုစီးနိုင်ရင်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူး။ သူ့ခြေလှမ်းဟောင်းတွေကိုပြန်လှည့်မကြည့်ဘူး။ ဒါပေမဲ့အဲဒီလိုလုပ်ဖို့လမ်းကြောင်းပြောင်းဖို့အရမ်းကြိုးစားရလိမ့်မယ်။
Exposure and Response Prevention သည် ဦး နှောက်ကိုပြန်လည်ပရိုဂရမ်ရေးရန်ကူညီသည့်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုအမြင့်မှအဆက်ဖြတ်ရန်အသုံးဝင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်ကိုညစ်ညမ်းသောအတွေးများကိုဖော်ထုတ်ရန်နှင့်မြင့်မားစွာရုတ်တရက်ငြင်းပယ်ခြင်းကိုခံရစေသည်။ ညစ်ညမ်းသောအတွေးများကိုဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်အပြုအမှုမရှိခြင်းသည် ဦး နှောက်ကို“ ဘာလဲ၊ ရုံဖြစ်ပျက်? ညစ်ညမ်းသောအရာနှင့်အကျွမ်းတ ၀ င်ရှိသောအလွန်အာရုံစူးစိုက်မှုရှိသောအာရုံကြောလမ်းကြောင်းသည်၎င်းကိုနောက်တဖန်မရပေ။ ERP လုပ်လေလေထိုရှုပ်ထွေးမှုပိုမိုရှုပ်ထွေးလာလေလေဖြစ်လာလေလေဖြစ်သည်။
ဒါဟာအချိန်ကျော်ဆင်းချိုးဖျက်ဖို့စတင်သည်။ သင်တစ်ဦး sexy မိန်းကလေးကိုမြင်သောအခါကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမြင့်မားသောရ doesnt ကြောင်းသင်ယူဖို့ဦးနှောက်ကိုစတင်ပါ။ အဲဒါကိုများ၏အကျိုးအတွက်ငြင်းဆိုသောကြောင့်သင့်ဦးနှောက် porn ဘို့သင့်ကိုတောင်းစားရပ်တန့်ဖို့ startes ။ ဦးနှောက်ကယ့်ကိုအလွန်စမတ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်ပလပ်စတစ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏နှင်းလျောစီးသာ option ကိုကတခြားလမ်းကြောင်းအခြားလှုပ်ရှားမှုများအားဖြင့်လွှဲပြောင်းယူသောကာလ၌ကျိုးပျက်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကွန်ရက်ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်သောကြီးမားအာရုံကြောလမ်းကြောင်းကြောင့် ERP အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
porn နှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေစွဲပြီးတော့အသစ်ကကျန်းမာသန်စွမ်းလှုပ်ရှားမှုများအားဖြင့်၎င်း, ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့အားလုံးင့်တလျက်ရှိပါသည်ကားအဘယ်သို့ပြီးနောက်လွှဲပြောင်းယူနေပါတယ်။
ယခု OK ကိုသင်နားလည်သွားသည်။ သင်၌ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်ကြိုတင်မျှော်လင့်ထားသည့်ကြီးမားသောအာရုံကြောဆိုင်ရာ circuit တစ်ခုရှိသည်ကိုသင်နားလည်လာပြီ၊ အကယ်၍ သင်ပြတ်တောက်သွားပါကသင့် ဦး နှောက်သည်ထို circuit ကိုပိုမိုကောင်းမွန်သောလှုပ်ရှားမှုများဖြင့်အလိုအလျောက် rewire လုပ်လိမ့်မည်။ ERP ၀ င်သည့်နေရာသည်ဤတွင်ဖြစ်သည်။
ကျနော်တို့ကတကယ်တော့ porn ကိုကြည့်ဘယ်တော့မှဘယ်တော့မှရမည်ဖြစ်သည်။ ဒါကကျနော်တို့ကိုကျော်လွှားရန်ကြိုးစားနေခြင်းနှင့်ရှာကြသည်ရိုးရှင်းစွာအာရုံကြောဝါယာကြိုးခိုင်မာစေတယျ။ ကျနော်တို့ပြောင်းလဲမှုဘို့ငါတို့ပစ်မှတ်သောအရာကိုသုံးပါရန်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မှတ်ဉာဏ်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်ကိုယ်တိုင်က။ အဘယ်အရာကိုကြှနျုပျတို့ပွုအပိုင်းပိုင်းဒုတိယနှစ်ဝက်တပ်များထို့နောက်ဆားကစ်၏ပထမအစိတ်အပိုင်းကိုပြန်ဖွင်ဖြစ်ပါတယ်။
၁၀ မိနစ်လောက်စိတ်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာအတော်များများကိုငါရှာတယ်။ ကျွန်ုပ်တွင် 10 x3မိနစ်ကြားကာလတစ်ခုသတ်မှတ်ထားသောကြားခံ timer ရှိသည်။
0-3 မိနစ် - ကျွန်ုပ်မျက်စိကိုပိတ်ပြီးကျွန်ုပ်ထင်နိုင်သမျှရှင်းလင်းပြတ်သားသော porn ကိုစိတ်ကူးသည်။ ငါ့ ဦး နှောက်ထဲရှိဆားကစ်များကိုအသုံးပြုပြီး porn / သရုပ်ဆောင်သံသရာ၏ပထမအပိုင်းကိုပြန်လည်ဖန်တီးရန်ကျွန်ုပ်မှတ်ဉာဏ်ကိုသုံးသည်။ ငါ့ ဦး နှောက်ဟာအမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်နေတာကိုစဉ်းစားစေချင်တယ်။ အားကောင်းလေပိုကောင်းလေ ကျွန်တော့် ဦး ခေါင်းခွံထဲမှာကျွန်တော့် ဦး နှောက်ကဘာမှထူးခြားတာမရှိဘူး။ ကျွန်ုပ်သွားသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်၏သွေးခုန်နှုန်းမြင့်တက်လာပြီးအသက်ရှူသည်တိုသည်။ အပြည့်အဝဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့်လုံးဝမလက်ဆွနှင့်အတူ။ မျက်လုံးတွေပိတ်ပြီးဘယ်နေရာမှာမှမရှိပါဘူး။ ငါအစစ်အမှန်အခြေအနေ၌ရှိသကဲ့သို့ငါကဲ့သို့ငါ၏ကိုယ်ခန္ဓာအထွတ်အထိပ်ရောက်ဖို့စိတ်ကူးခြင်းနှင့်ကျုံ့။ ကျွန်တော့် ဦး နှောက်ကိုလုံးလုံးအရူးလုပ် ငါထင်တာကပစ္စည်းပစ္စယတွေကိုငါကြည့်နေတယ်၊ တိုက်နယ်ဆင်းသည်! မီးတောက်နေသည်။ လိင်ဟော်မုန်းတစ်ခုအတွက်တည်ဆောက်ခြင်း! စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုမျှော်လင့်။ Receptors တွေကသတိကြီးစွာနဲ့ရောက်နေတယ်။ ဝင်ပေါက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမြင့်မားသော! ……
3-6 မိနစ် - အပြီးအစီးနှင့်လုံးလုံးလျားလျား! ချွန်ထက်သောရပ်တန့်မှုပိုကောင်းလေ။ ရုတ်တရက် မြတ်နိုး။ စက္ကန့်အနည်းငယ်အကြာတွင်ကျင်းပခဲ့သောပုံများပျောက်ကွယ်သွားပြီ ငါ့ရဲ့တံခါးပိတ်တိတ်ဆိတ်မှုတွေ။ အသက်ရှူခြင်းကိုထိန်းညှိပြီးနက်ရှိုင်းသည်။ ရှူရှိုက်မိပါက ၅ စက္ကန့်၊ ၅ စက္ကန့်ကြာ၊ ၅ စက္ကန့်ကြာမှရှူပါ။ ပြန်လုပ်ပါ ဘာမှမစဉ်းစား။ အလွတ်ထားခြင်း။ ကျွန်တော့် ဦး နှောက်ကဘာတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်ဆိုတာလုံးဝမသိခဲ့ဘူး။ ဒါဟာအုတ်ရိုးကိုထိလိုက်ပြီ! ဒါဟာထွက်သရုပ်ဆောင်ကနေလာကြလိမ့်မယ်လို့ဓာတုပစ္စည်းများမဆိုလုံးဝငြင်းပယ်သည်။ ၎င်းသည်တုန့်ပြန်မှုကိုငြင်းဆိုခြင်းနှင့်၎င်းအားလုံးဝငြင်းဆန်ခြင်းဖြစ်သည်! circuit တည်ရှိခြင်း၏တစ်ခုတည်းသောအကြောင်းပြချက်သည်တုန့်ပြန်လုပ်ဆောင်မှုကြောင့်ပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ငါအနားယူပြီး ဦး နှောက်သွေးကြောမှာအားဖြည့်အောက်စီဂျင်တိုးများလာသည်နှင့်အမျှရည်ရွယ်ချက်သည်ဆုံးရှုံးသွားသည်။ သို့တိုင်အတော်လေးဗလာ။
၆ မိနစ် ၉ မိနစ် - လွန်ခဲ့သော ၃ မိုင်အကွာတွင်ကျွန်ုပ်သည်အများအားဖြင့်အခြားအမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏ပုံရိပ်များကိုကြည့်ရှုသည်။ ကျွန်တော့်မိန်းမ! ညစာစားရန်သို့မဟုတ်အားလပ်ရက်တွင်ကျွန်ုပ်၏ iPhone ရှိဓာတ်ပုံများရှိသည်။ ငါသူမ၏ပထမ ဦး ဆုံးတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနှင့်ပိုပြီးမကြာသေးမီသူတွေကိုအခါ။ ငါအချို့သောဆလိုက်ရှိုးဇာတ်ကားတွေအဖြစ်ကစားအချို့အကြိုက်ဆုံးချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိသည်။ ဒီစွဲလမ်းမှုကိုရိုက်နှက်ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်ရရှိသောအရာများနှင့်ကျွန်ုပ်မလုပ်ပါကကျွန်ုပ်အတွက်မည်မျှကုန်ကျမည်ကိုပြန်လည်စဉ်းစားသည်။ ငါရေးသားခဲ့တဲ့ရေးသားချက်အချို့ကိုပြန်လည်သုံးသပ်သည်။ ထိုအချက်ကိုအားဖြည့်ပေးပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည်တုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်ကောင်းသောအဖြစ်အပျက်နှင့်ကျွန်ုပ်ဘဝတွင်ပျော်ရွှင်မှုရရှိခဲ့သည့်အတွက်ကျွန်ုပ်မည်မျှကျေးဇူးတင်မိသည်ကိုသိသောအခါ၎င်းအချက်ကိုအားဖြည့်ပေးပြီးမျက်ရည်ယိုဗုံးများမကြာခဏကြုံတွေ့လေ့ရှိသည်။ ဆားကစ်ကိုငြင်းဆန်။ ၎င်းသည်တုန်လှုပ်ချောက်ချားပြီးယခုတွင်ကောင်းမှုအချို့ကိုထည့်သွင်းပေးသည်။
သုည Porn ပေါ်လစီ - မကောင်းသောဝံပုလွေကိုအစာမကျွေးပါနှင့်။ သငျသညျအပျော့ porn အချို့ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်သို့မဟုတ်ကုန်တိုက်တစ်လျှောက်ရှိတိုတောင်းသောအင်္ကျီကိုလိုက်လျှင်သင်ဘယ်တော့မှအလုပ်မဖြစ်ပါ။
တစ်နေ့လျှင်အလေ့အကျင့် ERP2သို့မဟုတ်3ကြိမ်။ ဒါဟာအမှန်တကယ်ပြန်တိုက်ခိုက်နေအရှိဆုံးအံ့သြဖွယ်အတွေ့အကြုံသည်။ ငါဒါနှစ်ပေါင်းများစွာများအတွက် sucker လာကြတယ်တာခံခဲ့ရပါတယ်နဲ့ရိုးရိုးလက်တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုလန်းဆန်း expereince ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကအတွင်းပိုင်းပေါ်မှာရှိသမျှသင့်အကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး။ Go နဲ့ဒီကမ်ဘာပျေါတှငျအခြို့သောတဦးတည်းမှအသုံးပြုမှုရှိစေသတည်း။ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းကို join ။ လမ်းပေါ်ကလူတွေကိုစောင်ဖြန့်ဝေ။ တစ်ဦးမာရသွန်အဘို့ရထား။ အသစ်သောလေ့လာမှုစတင်။ ဦးနှောက်ကို Give သို့ပြောင်းလဲပစ်ရန်ထိုက်တန်သောနေရာများ NEW ။ ကောင်းသောပစ္စည်းပစ္စယနှင့်အတူပျက်ပြယ်ဖြည့်ပါ။
ဂျာနယ်, ဒီမှာသင်၏မိတ်ဆွေများကိုထောကျပံ့။ သင်သိငါကဒီမှာသင်တို့၌ရေးသားခြင်းကုန်ရပြီအချိန်ကိုအမှန်တကယ်ငါ့အသန်နိဋ်ဌာနျကိုခိုင်ခံ့စေခြင်းနှင့်ရိုးရှင်းစွာအကြှနျုပျ၏ဇာတ်လမ်းအပေါ်သွားကြဖို့ငါ့ကိုများနှင့်အခြားအစှမျးသတ်တိကိုပေးသငျသညျကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်။
အကြှနျုပျ၏ update ကို
အောက်တိုဘာ 16 တွင်, ငါလွတ်လပ်ခွင့်6လကျင်းပနေနေပါတယ်။ ငါအချိန်ကာလအတွင်းမည်သည့်ညစ်ညမ်းဝင်ရောက်ကြပြီမဟုတ်။ ငါအချိန်အတွက် masturbated ကြပြီမဟုတ်။
ငါသည်သင်တို့ထက်နည်းနည်းအသက်ကြီးဖြစ်ကြောင်းကိုငါမူကား 40 နှစ်ပေါင်းဤပြဿနာနှင့်အတူရုန်းကန်။ ငါ့အသက်ကိုပြောင်းလဲမှုထူးခြားတဲ့ဖြစ်ရပြီနှင့်လွတ်လပ်ချိုမြိန်အရသာရှိတယ်။
ငါစိတ်ကူးထားသောပုံများသည်အလွန်မှေးမှိန်သွားသောကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ပတ် ၀ န်းကျင်သည်အလွန်ကျဉ်းမြောင်းသောကြောင့်ကျွန်ုပ်အတွက် ERP ခက်ခဲသည်။ ငါ့ကိုဒုက္ခရောက်စေတဲ့ stromg တိုက်တွန်းမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်မမှာနည်းနည်းအခက်အခဲရှိတယ်။ ငါနည်းနည်းပါးပါးအလုပ်များလာသောအခါငါပြtheနာကိုအစာမကျွေးသောကြောင့်အလွယ်တကူချိုးဖျက်နိုင်သည်။ ဝံပုလွေဆိုးသည်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေပြီးထောင့်တွင်အငတ်ဘေးရှိနေသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ယခုအချိန်တွင်သူ့ထက်များစွာခွန်အားကြီးနေသည်။ နေသမျှကာလပတ်လုံးကျွန်ုပ်အားထိုသူကိုကျွေးမွေးရန်မလွယ်ကူပါ။
ငါအစဉ်မပြတ်သော်လည်းငါ့အပုံရိပ်ယောင်အပေါ်အလုပ်မလုပ်ဖို့ရှိသည်မကွာမင်းသမီးမှငါ့မျက်စိစောင့်ရှောက်ရန်, ငါ့လိုအပ်ချက်ငါဆက်ရှိနေရမယ်ဘယ်လိုတင်းကျပ်ငါ့ထံသို့အစဉ်အမြဲသတိပေးခကျြပါပဲ။ ကျွန်မမှန်မှန် tempttion နှင့် opportunty နှင့်အတူတင်ပြနေပါတယ်ဒါပေမယ့်ကျွန်မရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမူဘောင်လုံလုံလောက်လောက်ဥပမာအားဖြင့်, တစ်ဦးတည်းအိမ်ကဖြစ်ခြင်းသို့မဟုတ်လုံးဝမအင်တာနက်စီစစ်ခြင်းရှိခြင်းဆိုကြာကြာငါ့ထံသို့အဘယ်သူမျှမကယ့်ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်, ထိုပြောင်းလဲသွားတယ်ကြောင်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်၏။
[3 မတ်လ] 20 နှစ်အတွင်း၏အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစှဲလမျးသူ (dial-up ကတည်းကတစ်ဦးစှဲလမျးသူ) အဖြစ်ငါဖြတ်၏မြောက်မြားစွာနည်းလမ်းများကြိုးစားခဲ့ကြပြီးမှသာယခုငါကယ်ဆယ်ရေးဆည်းပူးနှင့်သင်၏အ Ted ဟောပြောပွဲနှင့်ဤ website ကိုစတင်ပါပြီ။
ကျွန်ုပ်သည်ရက် ၃၀ ကျော်အခမဲ့ရုပ်ပုံများကိုပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်သည့် Edging အမျိုးအစား ၃ ခုသာရှိသည်။ သို့သျောလညျး, ငါ့နေ့စဉ်ဂျာနယ်ကနိဂုံးနာရီပေါင်း 30 ကျော်ကုသမှု၏ယခုလအတွင်းစုစုပေါင်း3နာရီကြာအောင်ကုသကြောင်းနိုးထနာရီပေါင်း5ကျော်သုံးစွဲကြောင်းပြသထားတယ်။ အနှစ် ၂၀ အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်အနေနဲ့ငါဟာတပ်မက်စိတ်မရှိဘဲရက်ပေါင်းများစွာသီတင်းပတ်တွေကြုံခဲ့ရတယ်။
ငါရေးသားနေရသည့်အကြောင်းအရင်းမှာအရင်းအမြစ်နှင့်နည်းလမ်းတစ်ခုကိုမျှဝေချင်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်၏စွဲလမ်းမှုကိုများစွာလျှော့ချပြီးကျွန်ုပ်အတွက်ပိုမိုမြန်ဆန်။ ပိုမိုထိရောက်သောပြန်လည်နာလန်ထူမှုကို ဦး ဆောင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်မျှော်လင့်သည်မှာ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အကျိုးရှိသကဲ့သို့အခြားသူများအတွက်လည်းအကျိုးရှိလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သိသည်မှာလူတိုင်းအတွက်အလုပ်မလုပ်နိုင်သော်လည်း၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်မှော်နှင့်တူသည်။ ငါတသမတ်တည်းအလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှအဖြေကိုငါတွေ့သောအသိပညာ၏နှစ်သိမ့်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားအားထုတ်မှုကျိုးနပ်သည်။
အဆိုပါ site ကိုဦးနှောက်ဓာတုဗေဒပြဿနာတွေနဲ့စှဲနေစဉ်အတွင်းပျက်စီးသည့် dopamine receptors ၏အနာရောဂါငြိမ်းစရာတွေနဲ့တိုက်ရိုက်ဇီဝဓာတုဗေဒပညာရှင်နှင့်အပေးအယူကရေးသားခဲ့သည်။ အဆိုပါ site ကိုဖြစ်ပါသည်: http://gettingstronger.org/2010/10/change-your-setpoint/
အစားအသောက်နှင့်လေ့ကျင့်ခန်းပါ ၀ င်သည့်ရိုးရှင်းသောအစီအစဉ်တစ်ခုမှာကျွန်ုပ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအချိန်ကိုများစွာလျော့နည်းစေပြီးကျွန်ုပ် dopamine လက်ခံရရှိမှုကိုသက်သာစေခဲ့သည်။ အခုဘဝဟာပိုမိုတောက်ပနေပုံရပြီးကျွန်ုပ်လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်အလယ်အလတ်အစာရှောင်ခြင်းမှရရှိသောသဘာဝ dopamine သည်မည်သည့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုအစီအစဉ်များမှထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်းထက်သာလွန်သည်။ ငါ ၁၀ ပေါင်ရှုံးပြီးပါပြီ ရက်ပေါင်း 10 အတွင်းနှင့်ရလဒ်အဖြစ်ပိုပြီးယုံကြည်မှုရရှိခဲ့သည်!
ဒါ့အပြင်ငါ Pavlovian နည်းလမ်းများသုံးပြီး deconditioning အစီအစဉ်ကိုဖန်တီးရန်စာမျက်နှာပေါ်တွင်စိတ်ပညာ link ကိုအပေါ်သတင်းအချက်အလက်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏အစပျိုးခြင်း၊ အချိန်ကာလနှင့်အခြေအနေများကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီးမိမိကိုယ်ကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖျက်သိမ်းရန်ကြိုတင်စီစဉ်ထားသည်။ ငါ (ပုံမှန်အားဖြင့်ညအချိန်တွင်နှောင်းပိုင်း၊ တစ်ယောက်တည်း၊ ကျွန်ုပ်၏အိပ်ခန်းထဲမှာ၊ ကျွန်ုပ်၏လက်တော့နှင့်အင်တာနက်၊ iphone နှင့်တုန်ခါမှုတို့) ရှိနေသည်။ ငါသာမန်ကွန်ရက်စာမျက်နှာများ (သို့) သော့ချက်စာလုံးရှာဖွေမှုများတွင်ပုံမှန်စာရိုက်ခြင်းစတင်သည် (သတိပြုပါ၊ “ edging” မဟုတ်ပေမယ့် reconditioning) Enter ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်မရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုကအလျင်စလိုခံစားခဲ့ရပေမယ့်မျှော်လင့်မိပါတယ်။ ဒါကြောင့်အဲဒီ browser ရဲ့ထိပ်မှာရှိတဲ့ X ခလုတ်ကကျွန်မရဲ့အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းပါ။ စာမျက်နှာကိုတောင်မဖွင့်ခင်ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်တယ်။ အနီးအနားမှာချောကလက်ပတ်ပတ်လည်နဲ့ဝိုင်ဖိုင်ကိုချက်ချင်းပိတ်လိုက်ပြီးကွန်ပျူတာကိုပိတ်လိုက်တယ်။ ဒါမှမဟုတ်ငါဖုန်းဆက်, bouncer အရက်မူး clubber ပြုသကဲ့သို့ငါ့ကားတစ်စီးသို့လိုက်ပို့နှင့်ငါ့ဒဏ်ရာအနည်းငယ်ဒဏ်ရာကြွက် ဦး နှောက်အားကောင်းလာစေရန်ငါ့နှုတ်၌ချောကလက်ပစ်။ အစည်းအဝေး ၁၀ ခုထက်ပိုပြီးတဲ့နောက်မှာသူတို့ထဲကတချို့ဟာမမျှော်လင့်တဲ့အစပျိုးမှုတွေ၊ တုန်လှုပ်ချောက်ချားမှုတွေနဲ့အတူလာခဲ့ကြတာပါ။ အဲဒါကပြင်းထန်တဲ့စွဲလမ်းမှုမှတ်တမ်းကကျွန်မကိုဒီအရာတွေကိုလည်းတွန်းလှန်စေတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းတိုတောင်းခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း၊ အစားအစာနှင့်ကျွန်ုပ်သိသည်မဟုတ်သောအသိဥာဏ်ဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်များနှင့်အတူဤအရာသည်သူငယ်ချင်းများနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း၊ ကျွန်ုပ်၏ပန်းတိုင်များကိုစီစဉ်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်၏ဂျာနယ်တွင်ရေးသားခြင်း၊ အကြံပေးခြင်း၊ သုတေသနပြုခြင်းနှင့်သိပ္ပံဆိုင်ရာအစီအစဉ်များကိုစောင့်ကြည့်ခြင်း (လေ့လာခြင်းနှင့်ဘာသာစကားအပါအ ၀ င်) ရှိသည်။ ကျွန်တော့်ဘဝကိုတကယ်ပြောင်းလဲစေခဲ့တယ်
ငါအမှန်တကယ်သူတို့ YBoP အတွက်အရာအားလုံးပြဋ္ဌာန်းရန်နှင့်ပင်ပြန်လည်နာလန်ထူတိုးတက်အတွက်ခြေလှမ်းထပ်မံအမှုအရာကိုယူကြောင်းယုံကြည်သကဲ့သို့သင်တို့ရပ်ရွာထဲတွင်အခြားသူများနှင့်ရှာဖွေရာတွင်ထိုအမျှဝေပါလိမ့်မယ်မျှော်လင့်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တဖန်လူအပေါင်းတို့သည်သင်၏အကူအညီ, အလုပ်နှင့်ထောက်ခံမှုပေးထားသောသည်။
PS - ဒါတွေအားလုံးကိုငါလုပ်ခဲ့ပြီးပြီ၊ ခွဲခွာရတော့မယ်၊ အခုငါ့ဟောင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းပြန်လည်ဆုံဆည်းရမယ်။ ဝိုး!
[မတ်လ ၂၆] ဟုတ်တယ်၊ ယခုတွင်ငါသည် extinction နည်းလမ်းကိုပိုမိုလွယ်လွယ်ကူကူအသုံးပြုနေသော်လည်းယနေ့နံနက်၌ပင်ကျွန်ုပ်သည်လှုံ့ဆော်ပေးသောအချိတ်အဆက်အသစ်များဖြင့်တုန်ခါနေပြီးကျွန်ုပ်၏ browser မှထွက်လာသည်။ ဒါဟာပြီးပြည့်စုံတဲ့အရာတော့မဟုတ်ပါဘူး၊ ရက်အတော်ကြာတဲ့ရက်အတော်များများရှိခဲ့ပေမယ့်အခုတော့ ၅၃ ရက်ရှိပြီ။ 🙂
နောက်တစ်ယောက် - အသက် ၁၆ နှစ်
ငါ pc ကိုရောက်တိုင်းအချိန်တိုင်းညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုဖွင့်ပြီးဆိုက်ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ငါဘယ်လောက်စွမ်းအားဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတာကိုသိနိုင်အောင်ပိတ်လိုက်တော့တယ်။ အဲဒီပထမ ၂ ပတ်ကအခက်ခဲဆုံးပဲ။ ငါဘယ်လိုလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာမသိသေးဘူး။ ရက် ၃၀ သန့်ရှင်းပြီးတဲ့နောက်မှာငါဟာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံနဲ့တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာတွေလုပ်ဖို့စဉ်းစားနေတုန်းပဲ၊ ဒါပေမဲ့အချိန်ကုန်လွန်လာတာနဲ့အမျှအဲဒါကိုမေ့သွားတယ်လို့ငါပြောနိုင်ခဲ့တယ်။
ဒါကြောင့်ဒီနေ့ငါဟာရက်ပေါင်း ၉၀ သန့်ရှင်းနေပြီးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုတောင်မစဉ်းစားတော့ဘူး။ ဟုတ်တယ်၊ ဒီ ၃ လအတွင်းငါ (၅ လိုမျိုး) အကြိမ်နည်းနည်းတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခဲ့ပေမဲ့ငါ porn မကြည့်ခဲ့ဘူး။ ဒါဟာဆယ်ကျော်သက်တိုင်းလိုလိုမလုပ်ရင်တောင်လုပ်သင့်တဲ့အရာပဲ။ အခုသုံးလအကြာမှာငါဟာလူသစ်တစ်ယောက်လိုခံစားရတယ်။
FRC: ကရင်ဆိုင်ရနိုင်တစ်ခုကိုအစားထိုး, Connect ကို (အကွံဉာဏျ)
အပြာစာပေ / စိတ်ကူးယဉ်ခြင်း - မဂ္ဂဇင်းများ၊ ရုပ်ရှင်များ၊ အင်တာနက်၊ အတွင်းခံအဝတ်အစားများစသည်တို့အပါအဝင်မီဒီယာအချို့တွင်ဖော်ပြထားသောလူများ၏ဓါတ်ပုံများ / ဗီဒီယိုများသို့မဟုတ်လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူများပါဝင်ပြီးသင့်ရုပ်ပုံများကိုသင့်စိတ်ထဲမြင်ယောင်စေသည်။ ဤအမျိုးအစားတွင်လူသိများသောစျေးဝယ်စင်တာ၊ လေဆိပ်၊ ရေကူးကန်နှင့်အတိတ်ကဆက်ဆံရေးများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံမှုများအကြောင်းစိတ်ကူးယဉ်မှုများအပြင်လူအများမြင်တွေ့ရသော“ တကယ့်” လူများအကြောင်းစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းလည်းပါဝင်သည်။
တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ-ဒီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပျြောအပါးအတှကျအဆို Self-stimulation ပါဝင်သည်။ ဒါဟာမကြာခဏညစ်ညမ်းပုံရိပ်များသို့မဟုတ်ယဉျနှင့် တွဲဖက်. ဖျော်ဖြေနေသည်။
Virtual Sex - လိင်ဆက်ဆံခြင်းတွင်ပါဝင်သောအခြားသူတစ် ဦး ပါ ၀ င်သည့်မည်သည့်ထွက်ပေါက်မဆိုပါ ၀ င်သော်လည်း၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိတွေ့မှုမရှိပါ - cyber sex, chat, sexting, singles hook-up websites ။ ဤသည်မကြာခဏပါဝင်သည်သို့မဟုတ်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်သည်။
ခ / အခွအေန
က c / အပြုအမူ
တစ်ဦး / စိတ်ဓာတ်ကျ feeling
ခ / ခံစားမှုပယ်ချ
က c / ခံစားမှုစသည်တို့ထွက်ကိုမီးရှို့
ဥပမာ - အိပ်ရာ၌အိပ်ခြင်း
အစပျိုး - အိပ်ရာဝင်ဖို့ကြိုးစားနေတာငါအိပ်ရာထဲမှာလဲနေပြီးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာကိုခံစားရတယ်။ သင်သည်အပြုအမူတွင်ပါ ၀ င်ရန်ရုတ်တရက်တိုက်တွန်းခြင်းခံရသည်။ အဲဒါကိုမတိုက်ခိုက်ဘဲရဲရင့်စွာရင်ဆိုင်ပြီးစိန်ခေါ်ပါ။ ၎င်းသည်ရဲရင့ ်၍ မှန်ကန်သောနှင့်အလွန်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများ၏အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်ဖြစ်ပြီးသင်အဟောင်းကိုလိုက်နာပါကအမြဲတမ်းဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်
ဒါက TRIGGER နှင့်အတူဇာတ်ညွှန်းနှင့်မျက်နှာ-ကကြေညာချက်သည်: ခေါင်းစဉ်: အိပ်ရာထဲမှာလဲလျောင်း
မျက်နှာ-ဒါဟာ (ငါ) အိပ်စက်ရန်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်တိုက်နယ်ဟောင်းများကိုအသုံးပြုသောကျွန်ုပ်၏ Responder မျှသာဖြစ်သည်။ ဒါဟာစက္ကန့်ပိုင်းအတွက်အဆင်ပြေပေမယ့်ငါ့ကိုထိန်းချုပ်မှုထဲကခံစားရတယ်ကျန်ရစ်။ Climax သည်အိပ်စက်ခြင်းအတွက်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမဟုတ် - ကျွန်ုပ်သည် autopilot တွင်သာနေထိုင်သည်။ ဒါကကိုယ့်ဘဝကိုဘယ်လိုအသက်ရှင်စေချင်တာလဲ။
ထက် (II ကို) ကိုအစားထိုး-ကဝင် ကြေညာချက်: သင်မယ့်အစားသင့်ရဲ့ဟောင်းများကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏လိုချင်တာတွေ၏ Bold, တိကျတဲ့ဖော်ပြချက်။ သငျသညျသစ်တစ်ခုကျန်းမာအပြုအမူနှင့်အတူဟောင်းလမ်းကိုအစားထိုးပါလိမ့်မယ်တဲ့အခါသင်ခံစားမိပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုအလွန်အသေးစိတ်အချက်အလက်ဖော်ပြချက်
သငျသညျသစ်တစ်ခုကျန်းမာအခြားရွေးချယ်စရာတွေနဲ့စဉ်းစားသင့်ရဲ့ဟောင်းများကိုလမ်းကိုအစားထိုးအခါတိုင်း, သငျသညျအဟောင်းများကို circutry ကျုံ့နှင့်အသစ်သော circuitry တိုးချဲ့။ သင်မြန်အသစ်ရဲ့ဦးနှောက်ကိုလမ်းကြောင်းချဲ့ထွင်ဖို့ပူးတွဲပိုမိုအစွမ်းထက်စိတ်ခံစားမှုများနှင့်ခံစားချက်များကို။
Connect ကို (III ကို) - တခြားလူ့ဖြစ်လျက်ရှိချိတ်ဆက်၏လုပ်ရပ် (ဆိုလိုသည်မှာ: မိခင်, မိတ်ဆွေတစ်ဦးမှမခေါ် - ပြီးအဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့စကားပြောဆိုမှုရှိသည်) ကိုယ့်ကိုကိုယ်မှ, (။ ဆိုလိုသည်မှာဆငျခွငျ) သို့မဟုတ်ကျန်းမာထွက်ပေါက် / အပြုအမူ ( ထွက်. အနည်းငယ်မိုင် run)
မြေတပြင်လုံးလှည့်ကွက်တစ်ခုကျန်းမာလမ်းအတွက်ချိတ်ဆက်ကိုလည်း dopamine ဖြန့်ချိသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ တဖန်သင်တို့နောက်မှအကောင်းခံစားမိကြောင်း။
ခလုတ်ခုန်ပြီးနောက် (နောက်တစ်ကြိမ် - နောက်ဖေးမဟုတ်ပါ) နှလုံးခုန်နှုန်းနှေးကွေးစေရန်သင်အကြိမ်အနည်းငယ်ရှူရှိုက်မိခြင်းကိုလည်းအကြံပြုသည်။ သင်၏နောက်ဆုံးအသက်ရှုခြင်းကိုကြာကြာကိုင်ထားပြီးလွှတ်လိုက်ခြင်းသည်သင်ဂုဏ်ယူသည့်အပြုသဘောဆောင်သည့်အရာတစ်ခုကိုစဉ်းစားသည်။ အောင်မြင်မှုအချို့ဖြစ်နိုင်သည်
ငါရှင်းပြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ Candeo အကြောင်းသင်ပိုမိုသိလိုလျှင်သင် sign up လုပ်ပြီးသင်ကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးရမည်။ အခမဲ့မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ငါဒီကိုသွားဖို့မကြိုးစားဘူး
မှတ်ဉာဏ် 'လှည့်ကွက်' သည်မူးယစ်ဆေးစွဲမှုကိုသက်သာစေသည်